विमानबाट खसेर बाँचेको त्यो क्षण
रुद्र देवकाेटा काठमाडौं, २८ मंसिर
म मरेर पनि बाँचेको यो अर्को दुर्घटना हो । २०५२ माघ ३ गते बिहान घर वरपरका बिरुवाहरू र बार–बन्देज हेरचाह गर्ने क्रममा केही चार–पाँचवटा सुन्तलाका जीर्ण बोटहरू काटेर हटाएँ ।
त्यस दिन दिउँसो १ः३० बजे काठमाडौंबाट उडेको विमानमार्फत् रुम्जाटार हुँदै आयोजना क्षेत्रमा पुग्नु थियो । एडीबीसँग भएको समझदारीअनुसार मासकृविआअन्तर्गत पर्ने सोलुखुम्बू, ओखलढुङ्गा र खोटाङ तीनै जिल्लामा भएका १२ वटा कृषि तथा पशु विकास सेवा केन्द्र घुमेर आवश्यक जानकारी सङ्कलन गनुपर्ने काम थियो ।
आयोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारी र सहभागी कृषक समुदायहरूलाई समेत उपयुक्त तालिमको आवश्यकता पहिचान गरेर १५ दिनमा काठमाडौँं फर्किने कार्यक्रम थियो ।
यसै क्रममा मेरो अफिस एप्रोस्क्बाट केही कागजातमा दस्तखत गर्न बाँकी रहेको भन्ने बुभझेकाले त्यसका लागि ती कागजपत्र लिएर आउन भनेको थिएँ । लेखा शाखामा काम गर्ने साथी जनक उदय र ड्राइभर नरबहादुर गुरुङ मेरो घरमा आए । काम सकेर मलाई पनि एअरपोर्टसम्म पुर्‍याएर उनीहरू अफिस फर्किए । म भने विमान चढ्ने तरखरमा लागेँ ।
त्यहाँ पुग्दा कताकता सुनसान जस्तो लाग्यो । आफूले चिनेका दुई जना स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरू जुम्लाबाट फर्केको भन्दै निस्कँदै हुनुहुन्थ्यो । म भित्र गएँ । ती दिनहरूमा रुम्जाटार सामान पठाउनेहरूको एअरपोर्टमा भीड हुने गथ्र्यो । म धेरै काठमाडौं–रुम्जाटार उडिरहने र आफ्नो सामान धेरै नहुने यात्रुमा पर्थें ।
म जहाज चढ्ने ठाउँतिर लागेँ । त्यहाँ रुम्जाटार जाने सबै यात्रु आतुरसँग पर्खिरहेका थिए । मैले राम्ररी चिनेकामध्ये रुम्जाटर एअरपोर्टका म्यानेजर विष्णु जमकटेल पनि थिए । मंगलबार हुनाले त्यो दिन निस्केको साप्ताहिक पत्रिका ‘पुनर्जागरण’ मसँग थियो । त्यो लिएर म सोफामा बसेर पढ्न थालेँ ।
एकछिनमा प्लेनको नौलो आवाजले हाम्रो ध्यान खिच्यो । सबै जना त्यो जहाज हेर्न भनी उठे । बाहिरबाट आएको जहाज, अचम्मको आवाज निकाल्दै अवतरण गर्‍यो ।
तर, त्यतिखेर त्यहाँ सबै स्थिति ठीकै देखियो । मैले सानो स्वरमा भनेँ, ‘जहाजजति सबै थोत्रा भइसके, के गर्नु र ? सके आफू त्यही जहाजमा पो पर्ने हो कि ?’ यति गुनगुनाउँदै भित्रतिर हेर्दा जमकटेल र एक व्यक्ति ढुक्कसँग गफ गर्दै थिए ।
पछि थाहा भयो ती अर्का व्यक्ति पाइलट रामसिंह गुरुङ रहेछन् । उनीहरूलाई देखेर मैले मन बुझाएँ, रुम्जाटारका हाकिम र पाइलट पनि त त्यही जहाजमा जाँदै छन् नि ! खराब भए त त्यो पाइलटले पनि त त्यो जहाज लैजाँदैन होला नि ! उसलाई पनि त आफ्नो ज्यानको माया होला ।
यति मनमा कल्पँदै सोफामा गएर बसेको मात्र थिएँ, सूचना आयो, ‘रुम्जाटार जाने यात्रीहरू सेक्युरिटी चेकका लागि आउनुहोला ।’ एअरपोर्टभित्र गएर हेर्दा त केहीबेर पहिले अनौठो आवाज निकाल्ने प्लेन नै हाम्रो भागमा परेछ । जे भए पनि जहाजभित्र छिरेर म अगाडिको लाइनको एकल सिटमा बसेँ अनि साथमा भएको पत्रिका पढ्न थालेँ ।
एकछिनपछि जहाज गुड्न थाल्यो तर मुख्य धावन मार्गमा पुग्न नपाईकन धेरैबेर रोकिनुपर्‍यो । झण्डै दस मिनेटको पर्खाइपछि बल्लबल्ल हाम्रो जहाजले बाटो पायो ।
मुख्य धावन मार्गमा गुड्न सुरु गरेपछि जहाजको गति त बढ्यो तर उड्ने चालै गर्दैन । राडार भएको ठाउँ कटेपछि त मलाई डर लाग्यो, अब प्लेन उडेन र दुर्घटना हुने भयो भन्ने निश्चित सोचाइ गर्दै थिएँ, त्यति नै बेला के भयो, थाहा छैन ।
अचानक ‘अब साझाको बस आइपुग्छ, सबैलाई त्यसैमा हालेर लैजाने’ भनेको आवाजले मेरो ध्यान खिचेछ अनि मैले सोचेँ, जहाज दुर्घटना भएछ । हल्लाखल्ला, रुवाबासी प्रशस्तै भयो । ‘हामीलाई बचाउनुहोस्’ भन्ने आवाज पनि सुनिइरह्यो । मलाई त होस आउने, हराउने भइरहेको थियो । म पनि बीचबीचमा कराइरहेको जस्तो लाग्छ ।
मैले देखेँ, हाम्रो जहाज आलुखेतको बीचमा पुगेको रहेछ । जहाजभित्रका यात्रुहरूमा रुवाबासी धेरै भएपछि हामीलाई उठाउन मानिसहरू आए । ती आउनेमध्ये एक जनाले मलाई देखाउँदै अर्कोसँग भने, ‘यो मान्छेको खुट्टा भाँचिएको छ, राम्ररी उचालेर लगी बसमा राख्नू है !’
बानेश्वरको ट्रलिबस कार्यालय अगाडि आएपछि मैले अलिक होश्स पाएँ र सोचेँ, वीर अस्पताल लैजान लागेछन् । त्यसै बेला मैले मेरो खुट्टा भाँचिएको छ भन्ने सम्झिएँ । खुट्टातिर हेर्छु त दाहिने खुट्टो तुर्लुङ्ग झुण्डिरहेको छ । हात चलाएँ, लेख्ने तरिकाले । ठीकै रहेछ । त्यसपछि शहीदगेट हुँदै अगाडि बढेर वीर अस्पताल गेटमा पुगेर बस रोकियो ।
बसबाट ओराल्न सम्बन्धित मानिसहरू आए । ओराल्न आएकासँग मैले भनेँ, ‘मेरो खुट्टो भाँचिएको छ । ढाड पनि चलाउन सक्दिनँ, अलिक विचार गरेर लैजानुहोस् है !’
भित्र लगे । फेरि भनेँ, ‘मलाई सबैभन्दा कुनामा राखिदिनुहोस् है !’ त्यसअनुसार नै राखिदिए ।
त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र अन्य आवश्यक सेवाहरू साुरु भए । मेरो खुट्टाको एक्स–रे पनि गरियो । त्यसपछि ‘तपाईंको दुर्घटनाबारे कसलाई खबर गर्ने ?’ भन्दै सोध्न आए । मैले आफ्नी धर्मपत्नीको नाम र घरको टेलिफोन नम्बर भनेँ, ‘उमा देवकोटा, ...४३१७२६ ।’
त्यसपछि फेरि मेरो होस हराएछ । होस खुल्दा उमा मेरो नजिक बसेर रुन लागेकी थिइन् । सायद उनको रुवाइले मात्र मेरो होस खुल्यो ।
मैले उनलाई भनेँ, ‘नरोऊ, म बाँचेँ । यत्रो ठूलो दुर्घटना दुईवटा खुट्टा भाँचिएका छन् । त्यसमा काठको खुट्टा लगाउन मिल्छ । हात र टाउको ठीक छ । लेखपढ गरेर जीवन बिताउने हो । त्यति गाह्रो पर्दैन, नरोऊ ।’ उमा फेरि रुन थालिन् ।
केहीबेरपछि भेट्न आउनेहरू बढ्न थाले । मेरो घरमा भन्दा ओखलढुङ्गा कार्यालयमा पहिले खबर पुगेछ । राजेन्द्रप्रसाद भारी त्यसबेला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बूमा योजना अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र मैले सँगै प्लेन टिकट किनेका थियौँ । उहाँ फाप्लुको हुनाले हाम्रो दुर्घटनाको बारेमा सल्लेरी पुगेपछि मात्र थाहा पाउनुभएछ ।
उहाँले नै मेरो बारेमा केही बुझेर हाम्रो घरमा फोन गर्दा भन्नुभएछ, ‘सर त दुर्घटनामा पर्नुभयो तर खबर पाएसम्म उहाँ ठूलो समस्याबाट मुक्त हुनुहुन्छ ।’ त्यो खबरले घरमा छोराछोरीहरू र अरू सदस्यहरूलाई केही राहत भएछ ।
साँझमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी आफ्नो क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरू र अन्य साथीहरू लिएर बिरामीहरूको अवस्था बुझ्न आइपुग्नुभएको थियो । भोलिपल्टदेखि व्यक्तिगत रूपमा भेट्न आउनेहरूको ताँती लाग्न थाल्यो ।
ती दिनहरूको प्रमुख समाचार नै त्यही थियो । मैले पत्रकारलाई दिएको विवरण शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठीक लागेन रे ! त्यसैले त्यहाँबाट पनि धेरै मानिसहरू आए, ‘मेरो भनाइ फिर्ता लिइदिनुपर्‍यो’ भन्दै ।
अब आइन्दा त्यो कुरा नभन्ने सल्लाह भएर शानेवानिका हाकिमहरूको भेट्न आउने काम कम हुन थाल्यो । दुर्घटनापछिका भेटघाटका विशेष याद आउने केही कुरा यहाँ लेख्नु उपयुक्त देखेर पेस गरेको छु ।
मेरा साथी भोला पोखरेल त्यसबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक थिए । दुर्घटनाको भोलिपल्ट आएर सोधे, ‘रुद्र, आज तिमीलाई कस्तो छ ?’ मैले झटपट भनेँ, ‘आज त मलाई आधा ठीक भइसक्यो ।’
उनले भने, ‘मैले बुझिनँ । अलिक ठीकसँग कुरा गर न ।’
मैले भनेँ, ‘ठीक तरिकाले नै हो । हिजो दुईवटै खुट्टा भाँचिएको भन्ने थियो । आज एक्स–रेले एउटा मात्रै भाँचिएको भन्ने निश्चित भएपछि आधा ठीक भएन त ?’
पछि थाहा भयो, मेरुदण्डको बाह्रौँ हाड पनि थिचिएको रहेछ । त्यसैले म सुतेको बेला यताउता फर्कंदा पनि अरूको सहायता चाहिने भयो । उठ्ने त कुरै भएन ।
प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल त्यसबेला योजना आयोगको कृषि विषय हेर्ने सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसभन्दा एक वर्ष पहिले हामीले पाँच वर्षसम्म नेपाल एग्रिकल्चरल एसोसिएसनको अध्यक्ष र महासचिव भई काम गरेका थियौँ । उहाँ भेट्न आउनुभयो र भन्नुभयो, ‘रुद्रजी, तपाईं त्यति ठूलो दुर्घटनामा परेर पनि बाँच्नुभयो । यसमा हामी धेरै खुसी छौँ ।’
मैले भनेँ, ‘मैले यो देशका लागि आजसम्म जे गरेको छु, त्यो पर्याप्त छैन, मैले अझै धेरै गर्नु बाँकी छ । म यति चाँडै र सजिलोसँग कहाँ जान्थेँ त ?’
त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन कृषिमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली भेट्न आउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डा. प्याकुरेलले तपाईंको साह्रै प्रशंसा गर्नुभयो । तपाईं त देशका लागि धेरै गर्नु छ भनेर नमर्नुभएको रहेछ । मेरो तपाईंलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र भविष्यको सफलताको शुभकामना ।’
म अस्पताल बसुन्जेलमा धेरै साथीहरू, आफन्त, चिनेजानेका व्यक्तिहरू भेट्न आए । अस्पतालमा बिरामी कुरुवा बस्नुपर्ने हुनाले बिहान उज्यालो हँुदा उमा अस्पताल पुग्थिन् । साँझको पालो कान्छो भतिजो योगेशको हुन्थ्यो ।
यसरी २०५२ माघ ३ देखि फागुन ९ सम्म जम्मा ३७ दिन म अस्पलातमा रहेँ । अझै अस्पतालमा नै रहनुपर्छ भन्ने धेरै शुभेच्छुकहरूको सल्लाह थियो । प्रमुख चिकित्सक भाइ, डाक्टर उपेन्द्रको सल्लाहले ३७ दिन मात्रमा घर फर्किइयो ।
अस्पतालबाट घर फर्कने कसरी भन्ने विषयमा ठूलो छलफल भएको थियो । बिरामीलाई सकेसम्म कम हल्लाउने र घरको पहिलो तल्लामा उकाल्नुपर्ने । यसबारेमा विशेष चाख लिने साथीमध्ये थिए, कृष्णमुरारी गौतम (उनी हास्यव्यंग्यकार चट्याङ्ग मास्टर भनेर चिनिन्छन्) । उनको विचारलाई उपेन्द्रले स्वीकृति दिएअनुसार सर्ने काम पूर्ण सफलतासाथ भयो । यसरी अप्ठ्यारो काममा सहयोग गर्ने सबै जनालाई म हृदयदेखि सम्झिरहन्छु ।
डा. उपेन्द्रको रायअनुसार खुट्टाका लागि ३ महिना सुत्नै पर्ने भयो अनि ढाडको अपरेसन नगर्ने, सुतेरै ठीक गर्ने । पछि ठीक भएन भने देखा जाएगा ।
यसरी म ३ महिना ओछ्यानमै रहेँ । १० वैशाखमा खुट्टामा लगाएका बाहिरी डण्डीहरू हटाएर प्लास्टर लगाउने निर्णय गरे– हाडको डाक्टरले । त्यसको ६ हप्तापछि हिँड्न मिल्ने प्लास्टर लगाइयो । म वैशाखीको भरमा हिँड्न थालेँ ।
अर्को ६ हप्तापछि हेर्दा भाँचिएको भाग त जोडिएको रहेछ तर अलिक बाङ्गो भएर । यस्तो बाङ्गो खुट्टाले हिँड्ने गरेमा चाँडै नै कुप्रो हुने र ढाडको बढी समस्या आउने हुन सक्छ भन्ने डा. उपेन्द्रको भनाइ थियो, जसअनुसार हाडको विशेषज्ञले अर्को अपरेसन गर्र्नुपर्ने देखाए ।
यो १२ असोज २०५३ को कुरो हो । त्यसपछि म दोस्रो विचार लिन टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्जका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. बीबी प्रधानकहाँ गएँ । उहाँले अस्टिओपोरोसिसको कारणले गर्दा तुरुन्तै अपरेसन नगर्ने सल्लाह दिनुभयो । केही दिनको सम्पर्कपछि २३ कात्तिक २०५३ मा मेरो अपरेसन गरियो– हाड जोड्न र स्टिल प्लेट राख्नका लागि ।
मेरो अपरेसन गर्दा, डा. बीबी प्रधान, डा. उपेन्द्र देवकोटा र डा. मोदराज मरहठ्ठा (अनेस्थेसिष्ट) त संलग्न हुनुहुन्थ्यो । डा. मरहठ्ठा नाताले भान्जा पर्नुहुन्छ । अपरेसन सुरुमा लोकल अनेस्थेसियाबाट गर्ने भन्ने सल्लाह भयो र काम सुरु भयो ।
मेरो बाङ्गो भएर जोडिएको हाड डाक्टरहरूले भाँचे । त्यसपछि मेरो दाहिने कम्मरतिर सुमसुम्याउन थाले र मैले बुझेँ कि हाड जोड्नका लागि हाड झिक्ने बेला भएछ । हुनत मलाई पहिले नै यो जानकारी दिइएको थियो कि कम्मरको कुरकुरे हाड ल्याएर जोड्ने ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्ने ।
तैपनि मलाई अब कम्मरमा काट्ने भन्ने बुझेपछि मैले डाक्टरहरूलाई ‘मेरो शरीर काट्ने चहलपहल मैले स्पष्ट थाहा पाइरहेको छु है’ भनेँ ।
मेरो कुरा सुनेपछि डाक्टरहरू मुखामुख गरेर मलाई एउटा सुई लगाइदिए । साँझ ६–७ बजेतिर मात्रै मैले वरपरको चहलपहल थाहा पाएँ । मलाई पूर्ण बेहोस हुने औषधि लगाइएछ । यस पटक मलाई १२ दिन मात्र अस्पतालमा बस्नुपर्‍यो ।
त्यसपछि प्रत्येक १५ दिनमा अस्पताल आउनुपर्ने गरी घर पठाइएँ । अस्पतालबाट निस्किएको पर्सिपल्टदेखि अफिस जान थालेँ तर वैशाखीको मद्दतले मात्र । सधैँ दह्रो सहयोगी पनि सँगै आवश्यक हुने सल्लाह डा. बीबी प्रधानले दिनुभएको थियो ।
त्यसको एक महिनामा सामान्य प्लास्टरको सट्टा हिँड्न मिल्ने प्लास्टर लगाइयो । तैपनि बैशाखी त प्रयोग गर्नैपर्ने भयो । त्यस वेला डा. प्रधानले अरू दुई हप्ता विना प्लास्टर नै हिँड्ने तर वैशाखी प्रयोग गर्नेे सल्लाह दिनुभयो ।
त्यसको १५ दिनपछि पनि हाड जोडाइमा प्रगति नभएकाले अरू एक महिना त्यसरी नै रहने सल्लाह भयो, डा. प्रधानको । तर, अर्को १ महिना पनि स्थिति उस्तै रहेकाले डा. प्रधानले एकपटक अन्यत्र पनि गएर देखाउने भनी श्रीराज अस्पताल, बैङ्कक जाने सल्लाह दिनुभयो ।
हामी मार्च ११ मा काठमाडौँबाट बैङ्कक उड्यौँ र पुगेको भोलिपल्ट श्रीराज अस्पतालमा देखायौँ । डाक्टरले मलाई खुट्टाले भार वहन नगरेकाले भाँचिएको हाडमा क्यालस् पलाउन ढिलो भएको बताए । त्यसैले अहिल्यैबाट भाँचिएको खुट्टामा अलिक बल पर्ने गरी हिँड्ने सल्लाह दिएबमोजिम मैले पनि त्यसै गरेँ ।
एक हप्तापछि फेरि देखाउन जाँदा हाडमा क्यालस् पलाएर भाँचिएको भाग जोडिने अवस्थामा आइसकेको भन्ने रिपोर्ट आयो अनि हामी ढुक्कसँग स्वदेश फर्कियौँ । पछि डा. प्रधानलाई भेट्न जाँदा आफ्नो समस्या त सामान्य भएको कुरा गर्दा उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘तपाईंकाे समस्या ठूलो नभए पनि दोस्रो विचार किन नलिने भनेर मैले उता पठाएको । फेरि तपाईंको खर्च त एडीबीको बीमाले बेहोर्छ नि !’
बैङ्ककबाट फर्केपछि पहिलो महिना वैशाखी र पछि लौरो टेकेर हिँड्न थालेँ । मेरो कार्यक्षेत्र सोलुखुम्बू, ओखलढुङ्गा र खोटाङ तीन जिल्ला थिए । २०५३ को असार १५ गते दिक्तेलबाट विराटनगर पुगेको मात्र थिएँ, दाजु नगेन्द्रले मेरो लौरो नै लुकाइदिनुभयो ।
उहाँलाई मैले लौरो टेकेर हिँडेको सह्य भएन रे ! यसरी २०५२ माघ ३ गतेबाट २०५३ असार १५ गतेसम्म मैले विभिन्न तरिकाले खुट्टालाई अन्य सहयोग लिएर हिँडेर मात्र आफ्ना दिन गुजारेँ ।
यसरी नेपाली र थाई डाक्टरहरूले गरेको उपचारपछि मेरो भाँचिएको खुट्टा तन्दुरुस्त छ । अहिलेसम्म केही समस्या आएको छैन ।
(देवकोटाको प्रकाशोन्मुख कृति ‘जिन्दगीका पाइलाहरू’बाट)
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २८, २०७६, ०७:४०:००